Xaqaaqa aad goáankiisa leedahay - Region Midtjylland
Du er her: Om os English Other languages somali Xaqaaqa aad goáankiisa leedahay
Xaqaaqa aad goáankiisa leedahay
Adigga oo bukaan socde ah ayaa goáaminaya in deeqda baaritaan ama daaweyneed ay bilaabanayso.
warbixinta laggu siiyey aawaddeed waa in aad ku bixisaa oggollaashahaagga.
Mar walba waad ka noqon kartaa ama qoommamayn kartaa oggollaashaha daaweyn ee aad horey udhiibtay.
Marxalladdaha badankooda waxaa la malaynayaa in aad fahantay in laggu daaweeyo haddii aadan adiggu diidin ama joojin. Daaweyn muddo dheer qaaddannaysa waad diidi ama joojin kartaa mar walba.
Bukaan socdaha ka yar 18 sano
Xaqa aad adiggu goáankiisa iyo ogogllaasho bixintiisa leeddahay waxa uu ka billaabbannayaa marka aad 15 sano jirsatid.
Ma waxa aad udhexeysid 15 ilaa 17 jir oggollaasho sidaa aawaddeed waad ka dhiiban kartaa daaweynta. Maaddaama aad welli tahay ilmo yar oo mas´uul lagga yahay waa in xitaa waalidka/waaliddiinta xilka waalidnimo haya ay hellaan warbixin, lagganna qeyb gelliyaa ggoáankaaga.
Haddii adigga iyo waalidku aydaan isku af garan oo ka heshiin waa adigga, qofka goáanka kalligiis gaari kara. Haddii shaqaallaha caafimaadku qiimeeyo in aadan adiggu welli bislaannin markaa waa qofka/dadka masúulka waalidnimo, haya kan/kuwa oggollaashaha bixinnaaya. Haddii aad 15 sanno jir ka yar tahay waxaa adigga dartaa oggollaashaha bixinnaya qofka/dadka masúulka waalidnimo haya.
Lixaad dhimanne ama quwad lá
Xannuunsanaha asagga ah ee quwadda uu ku bixin lahaa ogolaashaha lá ama ka dhiman tahay markaa waa ehelka ugu dhow/sokeeya ama masúulka qofka warbixinta oggollaashaho bixinnaya.
Daaweyn kadis ama deg – deg ah
Haddii aad ku sugan tahay marxallad qatar ah oo isla hadda aad ubaahan tahay daaweyn, hase yeeshee aadan oggollaasho bixin karin waa laggu daaweyn - oggollaasho la áan. Tusaalle ahaan haddii aad miir la áan tahay (oo aad suuxsan tahay).
Go´aamadda leh dhacdooyin qaas ah
Sharcigga caafimaadka waxa uu leeyahay oo ku jirra qawaaniin, halkaas oo bukaan socde ahaan aad xaq uleedahay weliba marxalladdo keenni karra dhimasho.
Marxalladdahaasi waxa ay kala noqon karraan kuwa kala ah:
Diidditaan dhiig gudoomid ama dhiig ku shubbid
cuddur aan la daaweyn Karrin, hase yeeshee wax laga qabo karo.